Homeराशिफलआज मिति २०७७ फाल्गुन २६ गते बुधबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
March 10, 2021 admin राशिफल 4600
सामा’जीक कार्यका क्षेत्रमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । परीश्रम अनु?पको फल प्राप्ती हुने समय रहेकोछ ।सभासम्मेलन जन्य कार्यका क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहेनछ । पारी’वारिक झोर झमेलाको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ ।
पारी’वारीक मनोरञ्जनको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । कार्य सम्पादनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । परिवारको मार्गदशर्न नमान्दा कार्यको क्षे’त्रमा अपजस खेप्नु पर्नेछ । नयाँ मित्रहरु सगँ को भेट घाटमा सा’मान्य यात्रा तथा खर्च हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
शारीरिक आलस्या’तले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला ।सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मा’नसिक चिन्ता उत्पन्न हुनेछ । आम्दानि मध्यम रहेता पनि बोलिको कारण साधारण दुर्घटनाको सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्य’क्तिह?को साथ छुट्नाले सहकार्यमा झन्झट ब्यर्होनु पर्नेछ ।
जिबन साथीको सह’योगमा गरीएका ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । मानसीक चन्चलताले सताउन सक्नेछ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम र समय ब्यतित हुन सक्नेछ । बोलिको प्रभुत्वले मानसम्मानको प्राप्ति हुनेछ । कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा सा’वधानि साथै गोप्यता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ सम्ब’न्धि समस्याले सताउन सक्छ बिशेष ध्यान दिनु होला । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला । शुभ चिन्तकको बृद्यि हुनाले मन’मा उत्साह बढ्नेछ । परोपकारको क्षेत्रमा समय र धन खर्चनु पर्ने स’मय रहेको छ । यात्रामा एक्लोपनको महसुस हुनसक्ला ।
आय आर्जनमा बृद्यि गर्नका लागि तपाईले बढी परीश्रम गर्नु पर्न सक्छ । बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ । आफु भन्दा सानाको सहयोगमा गरिए’को कार्य सफल रहनेछन । बौधिक ब्यक्तित्व सगँको सा’मिप्यता आगामी दिनलाई मार्गदर्शन बन्नेछ ।
पारीबारिक मनोरञ्जनका निम्ती धेरै समय र पैसा खर्चनु पर्नेछ । आफन्तजनको साथ सह’योगमा कमि आउनाले सामान्य मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य कठिनाई पश्चात मनग्य आम्दानीका स्रोतह? फेला पर्नाले मन उत्साहित रहनेछ । पारीवारिक झोरझमेलाको फन्दामा परिनाले दिन निरा’सा पुर्ण रहला ।
आफन्त’जन बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । मित्रह?को साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । स्वास्थमा आएको खराबिले कार्यमा ढिलाई उत्पन्न गराउनेछ । सामान्य बादबिबादको चक्करकाट्नु पर्नेछ । अ?को अनुश’रणले तपाईलाई समान्य झन्झट वा अपजस दिलाउन सक्नेछ ।
परीवारका कोहि सदस्यह?को स्वास्थमा खराबी आउन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा बृद्यि हुने योग रहेको छ । मनमा आट र शाहस को कमिले कार्य सम्पा’दनमा झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । जिबन साथीको सहयोगले ब्यापार ब्यवसायमा सुधार आउनेछ । सहि निर्णय हुन नसक्दा’ परिबारीक कलहको सामाना गनुपर्नेछ ।
शत्रु सबल रहनाले कुराकाट्ने ब्यक्तिह?को बृद्धि हुनेछ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । मनोबिलासिताका सामानह?मा सामान्य खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । अनावश्यक खर्च नियन्त्ररण गर्न गारो हुन सक्ला । आफ्नु प्रिय ब्यक्ति सगँको बियो’गले मन नि?त्साहित रहला ।
यात्रा फा’ईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । आय आर्जनको लागी राम्रो समय रहेता पनि सामान्य खर्च हुन सक्छ । नयाँ मित्र सगँको भेट वा प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । आम्दानी बृद्यिका लागी बीद्योत ब्यक्तित्वह?को मार्गदर्शन अबलंबन गर्नु लाभ’दाइक रहला । आय आम्दानिका क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ ।
आज मिति २०७७ चैत्र १ गते आइतबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
March 14, 2021 admin राशिफल 4106
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मित्र जनको साथ स’हयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । दाम्पति बिच
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,भोलि मिति २०७७ माघ २७ गते मंगलबारको राशिफल हे’र्नुहोस
February 8, 2021 admin राशिफल 4661
मेष राशि चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ : नयाँ मित्रहरु सगँ को भेट घाटमा सा’मान्य यात्रा तथा खर्च हुनसक्ने सम्भा’बना रहेको छ । अचल सम्पतीमा ह्रास आउनाले कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई
आज मिति २०७८ साल बैशाख २५ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
May 8, 2021 admin राशिफल 4558
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको मह’सुस हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य तनाबको सा’मना सामना गर्नु पर्नेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । बिश्वासिला
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243734)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231284)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (231009)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (229315)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (229256)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (228269)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228135)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227648)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (197276)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (195612)